China Dx51d Galvalume Aluzinc Dahaarka Birta Strip Warshada iyo soo saarayaasha |Zhanzhi
Dx51d Galvalume Aluzinc Dahaarka Birta ah
Xarigga birta Galvalume waxay leedahay dusha cad oo qurux badan oo silvery, waxay ka kooban tahay qaab dhismeedka aluminium-zinc, kaas oo ka kooban 55% aluminium, 43.4% zinc iyo 1.6% silicon oo lagu xoojiyay 600 ℃.Waa walxo daawaha ah oo muhiim ah oo inta badan loo isticmaalo nolol maalmeedkeena.Xarigga birta ah ee Galvalume waxay leedahay ku dheggan oo heersare ah oo rinji leh, waxaana lagu rinjiye karaa iyadoon horay loo daawayn iyo daawaynta cimilada.
Xarigga birta Galvalume wuxuu leeyahay sifooyin aad u wanaagsan: iska caabin adag oo daxalka ah, kaas oo 3 jeer ka badan xariijimaha galvanized saafiga ah;Waxaa jira ubaxyo zinc ah oo qurux badan oo dusha sare ah, kuwaas oo loo isticmaali karo sida muraayadaha dibadda ee dhismayaasha.
2.Grade: DX51d, iwm oo dhan iyadoo la raacayo codsiga macmiilka
5.Width: sida waafaqsan shuruudaha macaamiisha
7.Alu-zinc daahan: 30-150gsm
8.Spangle: spangle caadiga ah, spangle yar, spangle weyn
9. Daaweynta dusha sare: Daaweynta kiimikaad, saliid, qalalan, daawaynta kiimikaad iyo saliid, daabacaadda ka hortagga farta.
10.Packing: baakadaha caadiga ah ee badda u qalma
Nooca Birta AS1397-2001
Birta loogu talagalay Samaynta Qabow iyo Codsiga Sawir-gacmeedka Qoto dheer
CS nooca B, nooca C
yaree fursada wasakhaynta qoyaanka-kaydinta waxay samaysaa midab madow madow oo dusha sare ah
sii haynta dhalaalka macdan dhalaalaya muddo dheer
yaree u janjeera wasakhda kaydka qoyaanka
Daaweynta Kiimikada iyo Saliidda
Daawaynta kiimikadu waxay si fiican uga ilaalisaa wasakhaynta qoyaanka-kaydinta, halka saliiddu ay bixiso dufanka hawlgallada.
waa in la raro oo lagu kaydiyaa taxadar gaar ah si loo ilaaliyo xaaladaha qoyaanka hooseeya.
Daabacaadda faraha ka-hortagga
Xarigga birta galvalume wuxuu ka kooban yahay 55% aluminium, 43.5% zinc iyo 1.5% Silikoon.
* Xarigga birta galvalume waa mid la samayn karo, la alxan karo oo la rinjiyeeyay.
* Xarigga birta galvalume waxay leedahay iska caabin daxalka sare leh xaaladaha ugu badan ee jawiga.Tan waxaa lagu gaaraa iyada oo loo marayo isku dhafka ilaalinta allabariga ee zinc iyo ilaalinta xannibaadda aluminiumka.
Dahaarka birta galvalume ee daahan ka soo baxay-fulin daahan galvanized laga bilaabo 2-6 jeer ka badan maquufin kulul bir galvanized strip.
1.Dhismaha: saqafyada, gidaarada, garaashyada, gidaarada aan sanqadha lahayn, tuubooyinka iyo guryaha modulka ah, iwm.
2.Automobile: muffler, tuubada qiiqa, qalabka masax, haanta shidaalka, sanduuqa xamuulka, iwm.
3. Qalabka guriga: qaboojiyaha dhabarka qaboojiyaha, kariyaha gaaska, qaboojiyaha, foornada mikrowave elektarooniga ah, qaabka LCD, suunka qarxa ee CRT, iftiinka LED, golaha korantada, iwm.
Isticmaalka 4.Agricultural: guriga doofaarka, guriga digaaga, granary, tuubada aqalka dhirta lagu koriyo, iwm.
5.Kuwa kale: daboolka kuleylka kuleylka, kuleylka kuleylka, qalajiyaha, kuleyliyaha biyaha, iwm.